jeudi, 25 février 2016 17:25
Fitanana an-tsoratra fivoriana Foibe FJKM
FITANANA AN-TSORATRA NY FIVORIAN' NY Biraon' ny Mpiandraikitra Foibe (BMF-FJKM) androany 25 Febroary 2016- CFD Ampandrana. Mikasika indrindra ny raharaha manahirana, manjo ny Filohan' ny FJKM, Atoa Rasendrahasina Lala Haja mpitandrina no nodinihina tamin' izany.
jeudi, 25 février 2016 14:26
Kick-boxing : Manatevina traikefa ny mpikatroka any Atsimo Atsinanana
Manatanteraka fiofanana ho an'ireo mpitarika klioba sy mpikatroka kick-boxing any amin'ny Faritra Atsimo Atsinanana ny Tale teknika nasiônaly ny federasiôna malagasy ny kick-boxing, ny Maître Randriatafika Appolo sy ny lefiny ny Maître Gildas André. Ao Farafangana no anatontosana izany nanomboka ny alarobia 24 febroary ka hifarana ny zoma 26 febroary.
mercredi, 24 février 2016 22:39
Bemanevika : Nisy lehilahy efa maty hita teny amorontsirak’Ampasimbato Ambatojoby
Nahitana nofo mangatsika ana lehilahy iray manodidina ny 35 taona eo, teny amorontsiraka Ampasimbato Ambatojoby Kaominina Bemanevika Faritra SAVA, androany alarobia maraina.
mardi, 23 février 2016 22:26
Antsirabe : Miaramila maty tany amin’ny sakaizany
Mbola tanora heritrerony ity miaramila ity, izay manana fiaviana avy any Betafo. Maty tao an-tranon’ny sakaiza vaviny tao Mahazoarivo-Antsirabe ny tolakandro teo izy, tsy fantatra ny antony.
mardi, 23 février 2016 22:22
Sokatra Angonoky iray efa maherin’ny telopolo taona, saika nisy hanondrana no tratran’ny mpitandro filaminana tao Namakia ny Alakamisy 18 febroary lasa teo. Ireo avy ao amin’ny borigadin’ny zandary ao Namakia, distrikan’i Mitsinjo no nahatratra ity sokatra ity. Gony iray nisy nanipy amoron-dàlana no hitan’ireo mpitandro filaminana nanao fisafoana. Rehefa nosavaina io gony io dia sokatra angonoky iray no tao.
mardi, 23 février 2016 22:01
Raharaha Inanantonana : Nafahana vonjimaika ireo olona fito voampanga
Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo olona niisa fito niakatra Fampanoavana tao Antsirabe androany noho ilay resaka fandoroana ny biraon’ny Kaominina Inanantonana-Betafo ny alakamisy 04 Febroary 2016.
lundi, 22 février 2016 14:12
Fanatsarana ny fiompiana tantely : Tohotra miisa 470 nozaraina tany Farafangana
Mpiompy tantely miisa 150 avy amina Fokontany miisa 9, amin'ny Kaominina roa ao amin'ny Distrikan'i Farafangana, dia Vohilengo sy Tangainony, no nahazo tohotra fiompiana tantely 470 isa avy tamin'ny tetikasa AINA sy ASARA, izay samy vatsian'ny Vondrona Eropeana vola. Mitentina 73.000.000 Ariary izao fanampiana izao ka ny 50%-n’io vola io dia ny tetikasa ASARA LOVA FRDA Atsimo Atsinanana izay tantanan'ny CRS (Catholic Relief Service), ny 40% anjaran'ny tetikasa AINA tantanan'ny WHH (Welthungerhilfe) ary ny 10% dia anjara birikin'ny mpahazo tombontsoa.
dimanche, 21 février 2016 21:17
Jirama Manarintsoa: Saika namono zazakely
Zazalahy kely tokony ho teo amin’ny 8 taona teo ho eo no naratra mafy teny Manarintsoa noho ny fahatapahan’ny tarobihin’ny JIRAMA.